7 फेब्रुअरी। यस दिन छुट्टी र ऐतिहासिक घटनाहरू सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
7 फेब्रुअरी। यस दिनमा छुटहरू र ऐतिहासिक घटनाहरू
ग्रेगोरियन क्यालेन्डरका अनुसार,7फेब्रुअरी वर्षको 38 दिन मानिन्छ। सम्पूर्ण इतिहासमा, धेरै यादगार घटनाहरू संकेत गरिएको मितिमा देखा पर्‍यो। यो के यो लेख समर्पित हुनेछ।
शीतकालीन खेल दिन
2015 मा पहिलो पटक, जाडो खेल उत्सव फेब्रुअरी7मा मनाइनेछ। विश्वभरका एथलीटहरू फिगर स्केटि in, स्कीइ,, स्नोबोर्डि, र रूसी यसको अपवाद हुन्। सीप र निरन्तर प्रशिक्षण को लागी धन्यवाद, हाम्रो देश मा प्रतिस्पर्धा मा एक ठूलो संख्या को पुरस्कार छ। मिति संयोग द्वारा चयन गरिएको थिएन। ओलम्पिक खेलका राष्ट्रपतिको पहलमा, एक्सएनयूएमएक्सले फेब्रुअरीलाई छुट्टी बनाउने निर्णय गरे किनभने यो समयमा सोचीमा ओलम्पिक खेलहरू खोलिएका थिए। ठ्याक्कै एक वर्ष त्यो मिति देखि बितेको छ।
उत्सवको उद्देश्य मुख्यतया स्वस्थ जीवनशैलीको प्रचार हो। अवश्य पनि, शीतकालीन खेल दिवस सोची ओलम्पिकमा भाग लिने खेलाडीहरूको लागि एक श्रद्धांजलि हो। "रूसको स्की ट्र्याक" प्रतियोगिता खोलेर यो छुट्टी परम्परागत रूपमा मनाउने योजना छ। हकी, फिगर स्केटि and र स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताहरू सबै शहरहरूमा आयोजना हुनेछन्।
छुट्टी 19 महिनाको महिनाको महिना
बहाई समुदायमा, यो दिनले अरबी भाषामा "वर्चस्व" को महिनाको शुरूआत गर्‍यो, यो "मल्ट" जस्तो देखिन्छ। परम्परा अनुसार फेब्रुअरी7लाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ: प्रार्थना, प्रशासनिक र सामाजिक। सामुदायिक काउन्सिलहरू आत्मालाई उत्थान गर्ने कथाहरू भन्नको लागि आयोजित गरिन्छ, र संगीत त्यहाँ प्ले गर्न सक्छ।
अन्य देशहरूमा फेब्रुअरी 7
विदेशमा, यो दिन पनि स्मरणीय छ, तर विभिन्न कारणका लागि। उदाहरणका लागि, ग्रेनेडामा,7फेब्रुअरी राष्ट्रिय महत्वको छुट्टी हो। यो स्वतन्त्रता दिवस को बारे मा छ। टाटरस्टान गणराज्यमा, फेब्रुअरीको7ले कोर्स अफ आर्मस डेको रूपमा यादगार मिति चिन्हित गर्दछ। आयरल्याण्डमा, यस समयमा एउटा चर्चको बिदा मनाइन्छ। सेन्ट म्याट दिवस धेरै आइरिश मानिसहरु को लागी एक अविस्मरणीय मिति हो। जापानमा, फेब्रुअरीमा, उत्तरी बत्तीको दिन मनाउनुहोस्।
त्यो दिन को नाम छ?
फेब्रुअरी7मा, दुबै अर्थोडक्स र क्याथोलिकहरू। पछिल्लोमा पिट, कोलेट, यूजीन, क्रिसोलियस सामेल छन्।
अर्थोडक्ससँग बोरीस, अलेक्ज्याण्डर, अनातोली, भिटाली, ग्रेगरी, दिमित्री, पीटर, भ्लादिमीर, इत्यादिसँग फेब्रुअरी7को नाम दिन छ।
फेब्रुअरी7मा को जन्म भएको थियो?
यस दिन धेरै प्रख्यात व्यक्तित्वहरुको जन्म भएको थियो। उदाहरण को लागी, फेब्रुअरी7मा जन्म ती लेखक थॉमस मोर, चार्ल्स डिकेन्स, सिन्क्लेयर लुईस, पॉल निसान, डोरिस Gerke, संगीतकार रिचार्ड जेनेट, क्विन्सी पोर्टर, डिएटर बोहलेन, अलेक्सी मोगिलेभस्की हुन्। यस दिन धेरै पौराणिक वैज्ञानिक र वैज्ञानिकहरूको जन्म भएको थियो - शिक्षाविद् थियोडुल रिबोट, मनोचिकित्सक अल्फ्रेड एडलर, जीवविज्ञानी अलेक्ज्याण्डर चिजेभस्की, एयलरमा फिजियोलॉजिष्ट अल्फ, इन्जिनियर वान-एन, विमान डिजाइनर ओलेग एन्टोनोभ।7फेब्रुअरी रूसी सम्राट अन्ना Ioannovna, दार्शनिक पीटर स्ट्रुभ, कलाकार व्लादिमीर मकोभस्की, कोस्मोनाट कोन्स्टान्टिन Feoktistov को जन्मदिन हो। यस दिन, गायक अनिता त्सोई र अभिनेता एस्टन कुचर आफ्नो जन्मदिन मनाउँछन्।
फेब्रुअरी7मा, रूसी अर्थोडक्स चर्चले भगवानकी आमा, ओमरको भिक्षु मार्क र सिरियाको पोपलिया, पवित्र शहीद स्टीफन र बोरिस, प्रिलुकस्कीका विशप, कीव र गलिट्स्कीका महानगर, आदिलाई श्रद्धांजलि दिन्छन्। क्याथोलिकहरू सेन्ट कोलेट, पोप पियस एक्सएनयूएमएक्स, धन्य यूजेनिया स्मिथ र सेन्ट क्रिसोलियसको सम्झनामा धार्मिक बिदा मनाउनुहोस्।
19 शताब्दी अघि घटनाहरू
इतिहासमा फेब्रुअरी7एक धेरै महत्त्वपूर्ण मिति हो। 1238 मा, ब्लादिमीर शहर बाटूको फौजले घेरा हालेको थियो। त्यस दिन धेरै राज्यहरू र साम्राज्यहरूका राजा भए। उदाहरणका लागि, एक्सएनयूएमएक्समा, लियो फर्स्ट मक्काला, एक्सएनयूएमएक्समा, प्रिन्स अफ वेल्स, एक्सएनयूएमएक्स, जोहान, लक्समबर्गको, एक्सएनयूएमएक्समा, पोप जूलियस तेस्रो। 457 मा, Syktyvkar (कोमी रिपब्लिक) को शहर स्थापना भयो। सैन्य आपरेशन सम्बन्धित धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू त्यसबेला भयो। एक्सएनयूएमएक्समा, फ्रान्सेली र स्पेनिश सेनाहरूले जिब्राल्टरलाई घेरा हालेर रोके, र डेब्रे टाबोरको युद्ध इथियोपियामा लडे। एक्सएनयूएमएक्स वर्षमा, उत्तरीहरूले खचर्स रन्सलाई हराए। सबै कार्यहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा गृहयुद्धको क्रममा भएको थियो। फेब्रुअरीमा 1301 को 1311 वर्षमा, दोस्रो बोअर युद्धको बेला बेलायतीले लेडीस्मिथलाई छोडे।
शत्रुताका अतिरिक्त, फेब्रुअरी केही रोचक परिस्थिति र आविष्कारका लागि इतिहासद्वारा सम्झना गरियो। उदाहरण को लागी, फेब्रुअरी71845 मा, एक भान्डल विल्डे लोयडले ब्रिटिश संग्रहालयमा पोर्टलैंड फूलदान भत्काए। रूसी साम्राज्यमा 1847 मा पहिलो पटक, ईथर एनेस्थेसिया प्रयोग गरेर एक अपरेशन गरिएको थियो।
20 शताब्दी घटनाहरू
धेरै अविस्मरणीय घटनाहरू फेब्रुअरी7मा भएको थियो। विजय, स्वतन्त्रता वा यसको विपरित त्रासदीको चिन्ह - विभिन्न देशका बासिन्दाहरूको लागि यो मिति आफ्नै तरिकाले सम्झना गरियो। उदाहरण को लागी, बेलायत मा, साल को फेब्रुअरी 1907 तथ्य यो हो कि महिलाहरु लाई भोट छ अनुमति थियो को लागी प्रसिद्ध भयो। यो डर्ट मार्च को लागी धन्यवाद प्राप्त भयो। फेब्रुअरी7मा, तीन हजार महिला प्रतिनिधिहरू माटो र चिसोका माध्यमबाट ना bare्गो खुट्टा हिडे। त्यसबेलादेखि यस मिति इतिहासमा तल झर्छ।
फेब्रुअरी 1924 मा, युएसएसआर र इटालीका देशहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरे। थोरै पछि (1941 वर्षमा) प्रसिद्ध सोभियत पनडुब्बी K-55 सुरुवात गरियो। 1950 मा, का- 10 हेलिकप्टर पहिले जहाजको डेकमा सवार भयो। 1977 मा, Soyuz-24 अन्तरिक्ष यान शुरू भयो। 1984 मा, अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री इतिहासमा पहिलो पटक अन्तरिक्ष यानसँग कुराकानी नगरी बाहिरी अन्तरिक्षमा गयो। एक्सएनयूएमएक्समा, युएसएसआरले "उपभोक्ता अधिकारहरूको संरक्षणमा" कानून पारित गर्‍यो, जुन रसियाका आधुनिक बासिन्दाहरूले पनि प्रयोग गर्दछ। 1992 मा, जापानमा 1998 ओलम्पिक खेलहरू खोलिएका थिए।
तर सकारात्मक घटनाहरू मात्र फेब्रुअरी7को मिति सम्झना। 1951 मा, कोरियाली युद्धको बखत, राजनीतिक कारणहरूले गर्दा, 705 भन्दा बढी नागरिकहरू मारिए। 1981 मा, लेनिनग्राडको नजिक, 52 व्यक्तिहरू विमान दुर्घटनामा मरे। यी सबै व्यक्तिहरू सोवियत संघका प्रशान्त फ्लीटका नेताहरू थिए। डोमिनिकन रिपब्लिकमा पनि त्यस्तै दुर्घटना भएको थियो। त्यसोभए 188 व्यक्तिहरू मरे। 1998 वर्षमा अफगानिस्तानमा गम्भीर भूकम्पको कारण 4,5 हजार भन्दा बढी मानिस मरे।
21 शताब्दी घटनाहरू
21 शताब्दी भर्खरै सुरू भएको छ, तर फेब्रुअरी7पहिले नै केहि घटनाहरूको परिणाम स्वरूप एक यादगार मिति बन्न पुगेको छ। 2014 वर्ष रूसका लागि विशेष थियो। फेब्रुअरी7मा, सोचीमा 22 ओलम्पिक खेलहरू खोलिए, जुन हाम्रो देशको लागि सुरक्षित भन्दा बढी समाप्त भयो। विजय पछि, यो फेब्रुअरी7शीतकालीन खेल दिवस बनाउन निर्णय गरियो।
धेरै घटनाहरू राजनीतिमा गिर्‍यो: कोस्टा रिकाको चुनावहरू आउरा चिन्चिल्लाले जितेका थिए, युक्रेनमा भिक्टर यानुकोविचलाई युलिया टिमोशेन्कोले हटायो र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले राजीनामा गरे।
मानिसहरुमा बिभिन्न मान्यताहरु छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि यस दिनको मौसम कस्तो हुनेछ, अझ स्पष्टसँग दिउँसो खाजाबाट बेलुका साँझसम्म, तब यो जाडोको अन्त्यसम्म स्थापना हुनेछ। फेब्रुअरी7लाई ग्रेगोरिएभ दिन भनिन्थ्यो। प्रायः, शगुनहरू सत्य भए। साथै, यस मितिबाट सुरू गर्दै, कुनै छानाबाट पहिलो बूँदाहरू सुन्न सक्दछ। यद्यपि, अब यो चिन्ह पूर्ण रूपमा सत्य छैन किनकि रूस र अन्य देशहरूको मौसम निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ र फेब्रुअरीमा पनि गिरावट आउन सक्दैन।
विन्डोज बाहिर 2015 वर्ष मात्र हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, धेरै चाखलाग्दो एक यादगार दिन मा भयो - फेब्रुअरी 7। अगाडि के छ, र ईतिहासमा के मितिहरू तल जान्छन्? कसलाई थाहा छ ...
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,248 प्रश्नहरू।